Ankizy Aostraliana Mianatra Teny Warumungu Miaraka Amin’ny Cockatoo Radio · Global Voices teny Malagasy
Ankizy Aostraliana Mianatra Teny Warumungu Miaraka Amin'ny Cockatoo Radio
Voadika ny 07 Avrily 2015 14:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, 日本語, polski, русский, English
Ekipan'ny Pinarra Aku: Rosemary Plummer (ankavia), Pinangkarl (afovoany), ary i Kathy Burns (ankavanana). Nahazoan-dalana ny sary.
Noho ny nataon'olon-droa mpamoron-kira sy ny cockatoo fotsy (vorona) noforonin'izy ireo antsoina hoe Pinangkarl, dia mihira sy mihomehy ao anatin'ny fomba fianaran'izy ireo bebe kokoa ny atao hoe teny sy kolontsaina Warumungu ny ankizy avy ao amin'ny faritra Barkly ao amin'ny Sisintany Avaratr'i Aostralia.
Ny fandaharana an'onjam-peo sy ny fandraisam-peo “Pinarra Aku” dia noforonon'i Kathy Burns sy Rosemary Plummer, mpampianatra sady tompon-tanindrazana [traditional owner] ary nanangana ekipa mpamoron-kira ampiasaina amin'ny fanabeazana hatramin'ny taona 2011 . Apetraka ho mpilalao fototra amin'ny fandaharana ny cockatoo fotsy, ampahafantarana ny ankizy ny fiteny sy ny kolontsaina amin'ny alalan'ny hira sy tantara fohy mifampitafa. Vorona fahita manidina ambony loha manerana ny faritra izy io, ary ny anarana hoe “Pinangkarl” dia midika hoe “fahalalana sy fahazavan-tsaina.”
Nahita ny tokony ilàna tsy misy hatak'andro ny fahafahana mianatra teny fanampiny i Burns sy Plummer satria tsy taranja voatery ianarana any an-tsekoly ny teny Abôrizinalina. Anisan'ny tetikadim-pampianarana ihany koa ny fifantohana amin'ny ankizy tokony hianatra amin'ny ambaratonga voalohany, Hoy i Burns:
Satria mandalo ny taona tsirairay ary miha-maro koa ny olona antitra nandao ny tany, dia lasa ihany koa ny fahalalana. Raha tsy mitazona mafy izany fahalalana izany amin'ny fampitàna ny kolontsaina sy ny teny hoan'ny taranaka manaraka azy ny taranaka hoavy, dia mety ho very tanteraka. Raha tsy manome fotoana hianarana ny teny sy ny kolontsaina ho an'izany taranaka hoavy izany ny rafi-pampianarantsika na ny orinasantsika, dia ahoana no ahazoana fotoana ampy hihazonana izany hanana hery.
Amin'ny alalan'ny famokarana ireo fandaharana mahafinaritra hoan'ny ankizy manana lohahevitra manokana, dia mahazo lesona fianara-teny manaja ny kolontsaina ara-potoana ny sekoly sy ny tokantrano maro. Ao anatin'ny tetikasan'ny Barkly Regional Arts ny fandaharana, nilaza i Burns fa “nahita ny teny ho toy ny teny velona izy ireo. Ary izany no fomba hanatonanay ny fiteny, fa tsy ho lasa eny amin'ny talantalana / fitehirizina ny fitaovana .”
Manome torolalana fianarana ihany koa ny fandaharana izay azo trohina mba ahafahan'ny ankizy manaraka ny fandaharana. Isaky ny re ny clapsticks, dia fantatry ny ankizy ny fotoana hamadihana pejy hanohizana ny lesona manaraka. Afaka manao sary, manoratra ny voambolan'ny fiteny, manaraka ny tononkira na mamaky ireo tantara fampatoriana nosoratan'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana ao an-toerana ny ankizy.
Alefa isan-kerinandro ao amin'ny radio 8ccc ao an-tanàndehiben'i Tennant Creek ankehitriny ny “Pinarra Aku”, ary azo henoina mivantana avy ao amin'ny habaky ny onjam-peo. Anisan'ny tetikady hahazoana ankizy, ray aman-dreny sy mpampianatra maro araka izay tratra ihany koa ny fananana fandaharana vonona hotrohina amin'ny fotoana rehetra. Miezaka ny ekipa mba ho azo idirana amin'ny hadiry mavaina fa tsy mibahan-toerana ny tahiry fitroka, ka azo alefa amin'ny alalan'ny mailaka ihany koa izany raha ilaina noho ny tsy fisian'ny aterineto haingam-pisosa manerana ny faritra.
Nahatonga an'i Burns sy Plummer hihevitra ny fomba hanatsarana sy hampivoarana ny fandaharana ny fahombiazany. “Manantena izahay fa hitaona olona maro mba handray anjara amin'ny hetsika ny Pinarra Aku, ka ahafahana mampianatra teny hafa zara fa misy miteny hafa indray,” hoy i Burns.